Izindaba - Ukukhanyisa kwangaphandle: Izitayela ezi-3 eziguqula umkhakha
ilambu lomgwaqo eliholelekile
kwaholela ukukhanya kwensimu
kwaholela ukukhanya kwezikhukhula
kwaholela ukukhanya kwelanga
kwaholela emhubheni ukukhanya
Ukukhanyisa kwangaphandle: Izitayela ezi-3 eziguqula umkhakha
Kulezi zinsuku, leli dolobha liyisiteji esikhulu lapho izimpilo zabantu zenzeka khona. Uma sibheka ukuthi iningi labantu emhlabeni lihlala ezindaweni ezisemadolobheni nokuthi lo mkhuba uyanda nje, kubonakala kufanelekile ukuhlaziya ukuthi lezi zikhala ziguqulwa kanjani nokuthi yiziphi izinselelo ezibhekene nokukhanya.
Ukwenza kabusha isilinganiso somuntu ezindaweni ezingaphandle, noma ngabe umphakathi noma uyimfihlo, sekuyinjongo eyisisekelo yamasu asezindaweni zasemadolobheni okuhloswe ngawo ukwenza amadolobha kube nezindawo okuhlala kuzo, ezizinzile neziphephile kuwo wonke umuntu.
Ezikhathini zakamuva nje, ukuhlelwa kwedolobha sekuguqukele ekubhekaneni nemodeli lapho izakhamizi zabo ziyisikhungo sezenzo ezahlukahlukene ezenziwayo. Izakhiwo zasemadolobheni zinezinto zokusebenza nezingokomzwelo lokho kuthonya ngqo ukuxhumana nezikhala ezahlukahlukene nokuthi yikuphi ukukhanyisa okudlala indima ebalulekile.
Amathrendi ekukhanyeni kwangaphandle
Ukukhanyisa kuyinto esemqoka kule mibono emisha ngenxa yamandla ayo njengengxenye yokuguqula isikhala. Ukukhanyisa kwangaphandle yakhiwe ngezinhlelo zokusebenza zokukhanyisa ezisebenzayo ezigxile ekunikezeni ukubonakala okulungile kwemisebenzi eyenziwa ezindaweni ezivulekile, kanye nokukhanyisa kokuhlobisa okugxile ekuthuthukiseni izingaphambili ezakha le ndawo yasemadolobheni.
Ukufeza lezi zinhloso, izibani zokwakha kumele zivumelane nemikhuba, indlela yokuziphatha nezindlela zokuphila zabasebenzisi, kanti ngasikhathi sinye isebenze kahle futhi ihloniphe imvelo, usebenzisa amalambu asebenza kahle kakhulu futhi uvikele ukungcoliswa kokukhanya ngolawulo olwanele lwe-optical oluvimbela ukukhishwa okuphezulu nokukhanya okuyinsalela.
Idizayini yokukhanyisa isiyalo esiqhubeka ngokuqhubekayo esifuna ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi. Ngalokhu, kuyathakazelisa ukubuyekeza izitayela eziphambili kulo mkhakha.
Ukubuyisa izikhala zasemadolobheni zabahamba ngezinyawo
Iziphakamiso ezintsha ziyaphakanyiswa ngenhloso yokwakha indawo yabantu emadolobheni, njengokuhamba ngezinyawo emigwaqweni nasezindaweni ezimaphakathi, ukusungulwa kwezindawo zemigwaqo ezivinjelwe ezivumela abahamba ngezinyawo, noma ukubuyiselwa kwezindawo ezinomphakathi kanye nokuzivumelanisa kwabo nabasebenzisi.
Kulesi simo, ukukhanyisa kuba yinto esemqoka ekwazi uku:
● Ukuqondisa izakhamizi ekusetshenzisweni kwezikhala
● Ukuqinisekisa ukuphepha
● Ukuqondisa ukugeleza kwabasebenzisi ukuze bathande ukuhlala ndawonye
● Ukuthuthukisa izakhiwo ezakha isikhala
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokukhanyisa zezindawo zabahamba ngezinyawo, kukhona okulandelayo kwe-luminaire typologies: Ama-Recessed, ama-wallwashers, ama-spotlight, ama-bollards noma ama-Wall Lights athuthukisa indawo yasemadolobheni futhi engeza olunye ungqimba lolwazi esikhaleni ngokukhanyisa.
Ikhaya lezikhala zasemadolobheni
Imingcele yendabuko phakathi komkhakha womphakathi nowangasese ayifiphele. Ukuze kwenziwe ikhaya, idolobha kumele libe yikhaya lezakhamizi zalo, kwakhiwa izikhala ezibamema ngemuva kokushona kwelanga. Ukukhanyisa ngakho-ke kuvame ukuba wusizo kakhulu futhi kusondele kumsebenzisi ngokwakha umoya onobungane nokwamukela ngokwengeziwe ngamalambu ahlangana esikhaleni.
Lokhu futhi kuphumela ekukhanyeni okukhanyayo okukhanyayo kubakhanyisi abanokusatshalaliswa kokukhanya okuthile. Lo mkhuba uvuna ukusetshenziswa kwezikhanyiso zangaphandle ezinamazinga okushisa ombala afudumele.
Ukusimama kuyisisekelo semiklamo yedolobha ehlakaniphile esevele yaba ngokoqobo. Idolobha elihlakaniphile liyakwazi ukwanelisa izidingo zabahlali balo ngokubuka kwezenhlalo, ezemvelo, nezisebenzayo ngokuhlanganiswa kwe-Information and Communications Technologies. Ngakho-ke, ukuxhumana kubalulekile ekwakhiweni kwalolu hlobo lwendawo.
Ukukhanyisa kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekwakhiweni kwamadolobha ahlakaniphile. Izinhlelo zokukhanyisa ezihlakaniphile zinika amandla ukusebenza, ukuqapha, kanye nokuphathwa kokukhanyisa kwasemadolobheni ngamanethiwekhi wokuxhumana angenantambo. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe besilawuli kude, kungenzeka ukuvumelanisa ukukhanyisa nezidingo ezithile zesikhala ngasinye ngenkathi kuthuthukiswa izindleko futhi kunikezwe ukusebenziseka okukhulu nokuxhumana.
Ngenxa yale ndlela yokuqonda isikhala, amadolobha azichaza kabusha ubunikazi bawo. Ukwehluka ngokwendawo, okujwayele ukuhlangabezana nezidingo zenhlalo yezakhamizi zakhona, kunomthelela ekuguqulweni kwamasiko futhi kuvusa inhlalakahle yezakhamizi.
Ngakho-ke, ukuguquguquka kwezinhlelo zokukhanyisa ngaphandle ezikhaleni ezahlukahlukene ezakha idolobha kungenye yezindlela ezihamba phambili emkhakheni. Impumelelo yomklamo omuhle wokukhanyisa incike ekhonweni layo lokuxazulula izidingo ezisebenzayo, ezingokomzwelo nezenhlalo zabasebenzisi.
Isikhathi Iposi: Jan-08-2021
Qonda i-Photometric Light Analysis Pla ...
Amathrendi ekukhanyeni kwezebhizinisi: I-Versatilit ...
Ukukhanyisa kwangaphandle: Amathrendi ama-3 avukelayo ...
Ikheli: NO.37 Rongchuang Road, Mingwei Cun, Lizhou street, Yuyao City, Zhejiang China.